स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव, सय बढी नगरपालिकामा निमित्त ! – Nepali Digital Newspaper
स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव, सय बढी नगरपालिकामा निमित्त !
घटना र विचार, न्युज डेस्क !3years ago August 9, 2017
स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ । नयाँ बनेका नगरपालिकामा उपसचिव नहुँदा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको भरमा एसय बढी नगरपालिका सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदा अझै १२० नगरपालिका निमित्तका भरमा सञ्चालनमा आएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय कर्मचारी शाखाका प्रमुख भरतकुमार शर्माले जानकारी दिए । उनले सामान्यसँग पटक–पटक माग्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो गरे ।
‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि कर्मचारी माग गरेका हौं, उनले भने,‘अहिलेसम्म दुईपटक चिठी पठायौँ । तर सामान्यले अझै कर्मचारी पठाएको छैन ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ १२ र साउन १९ गते दुईपटक १२० नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका लागि उपसचिव माग गरेको थियो ।
यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अपुग कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताए । यसैगरी महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था भए पनि वीरगञ्ज र विराटनगरमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् ।
उपसचिव शर्माले ती महानगर ढिलो घोषणा गरिएको हुनाले उपसचिव नै कार्यकारी अधिकृत भएको बताए ।
उनले चाँडै नै ती दुई महानगरमा सहसचिव पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।